नेपालमा हेल्थ असिस्टेन्ट पढेको मान्छले विदेशमा काम गर्न जान पाउँछ कि पाउँदैन ?
Fri, Aug 07, 2020 | 00:01:43 NST
प्रश्न : नेपालमा तीन वर्षे हेल्थ असिस्टेन्ट कोर्श पढेको मान्छेले विदेशमा गएर नर्स भएर अथवा पारामेडिक्स भएर काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँछ भने कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ ?
उत्तर : बलबहादुर तामाङ, अध्यक्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - खाडी मुलुकमा हस्पिटलमा काम गर्न उहाँले पाउनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो डकुमेन्ट मेरै संस्थामा अथवा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यालयमा पठाउनु भयो भने हामी विभिन्न व्यवसायीहरुकोमा पठाइदिन्छौं । उहाँले आफ्नो योग्यता अनुसार खोजेको काम पाउनुहुन्छ ।